Diyaaradii La Waayay Ee Siday Ciyaartoygii Cardiff City ay La Soo Wareegtay Ee Emiliano Sala Oo La Helay – Somali Mail
Home Sport Ligue 1 Diyaaradii La Waayay Ee Siday Ciyaartoygii Cardiff City ay La Soo Wareegtay Ee Emiliano Sala Oo La Helay
Muddo dhawr todobaad ah waxaa la baadi goobayay meel ay jaan iyo cidhib dhigtay diyaaradii siday ciyaartoygii ay kooxda Cardiff City lacagta rekoodhka kooxdeeda ah kula soo heshiisay ee Emiliano Sala kaas oo hore uga tirsnaa kooxda reer France ee Nantes laakiin markii hore loo jooiyay raadinta diyaaradan waxaa makale axadii shalay dib loo bilaabay in baadi goobkii dib loo bilaabay.
Baadhitaankii subaxnimadii shalay laga bilaabay Channel Islands ayaa ahaa mid baadhitaanadii hore ka duwan wuxuuna ahaa baadhitaan badda hoosteeda ahaa waxaana ugu danbayn lagu guulaystay in la helay burburkii diyaaradii sidatay ciyaartoygii reer Argentina ee Emiliano Sala.
Diyaaradan oo magaceedu ahaa Piper Malibu ayaa la waayay January 22, laakiin ugu danbayn waxaa la xaqiijiyay in diyaaradani ay burburtay isla markaana waxaa qoyskii xidiga waqtiga dheer la raadinayay ee Emiliano Sala iyo bayloodkii diyaarada lagu war galiyay in ay geeriyoodeen.
Emiliano Sala ayaa 15 milyan gini ugu soo wareegayay kooxda horyaalka Premier leauge ee Cardiff City wuxuuna ka tirsanaa kooxda Nantes ee horyaalka France laakiin markii uu soo macasalaameeyay ciyaartoydii hore ee kooxdiisii Nantes ee uu soo gaadhi lahaa Cardiff City waxaa mar kaliya la waayay meel ay martay diyaaradii siday oo hadda la ogaaday in ay burburtay.
Markii hore loo waayay diyaaradan raqdeedii iyo ruuxeedii meel ay martay, ayaa la joojiyay baadhitaankii laakiin olole la sameeyay iyo lacag online ahaan lagu ururiyay oo ay ciyaartoy badani ka qayb galeen ayaa markale axadii shalay dib loo bilaabay baadhitaanka si wax lagu qanci karo loo helo.
David Mearns oo ah badmareen ayaa Sky News u sheegay in diyaaradii siday Emiliano Sala iyo waliba bayloodkii diyaaradan waday ee David Ibbotson ay hadda cadaatay in ay geeriyoodeen kadib markii la helay diyaaradii oo bada hoosteeda ku burbursan.
David Mearns ayaa yidhi: “Diyaaraadii siday Emiliano Sala iyo bayloodkii David Ibbotson waa la helay, horaantii subaxnimadii ayay shaqaalaha badmareenadu heleen. Qoysaskoodii ayaa lagu war galiyay, waxaana saaka warbixin soo saari doonta AAIB”.
David Mearns ayaa cadeeyay in ay tani tahay natiijadii baadhitaanu noqotay mid war argagax leh ku noqotay qoysaskii ciyaartoyga la raadinayay ee Sala iyo waliba bayloodkii diyaarada waday.
Qoyska Emiliano Sala ayaa hore u diiday in FA-gu uu kulamada Premier league ka horeeyay ciyaartoyda u soo xidho maro madow oo gacanta ay ku xidhan lahaayeen si ay ula murugoodaan Sala qoyskiisa laakiin waxay markaas qabeen wali rajo ahayd in baadhitaanka la sii wado haddii wax nolol ah lagu heli karo balse hadda ugu danbayn rajadii ayaa soo dhamaatay.
Previous article Warar dheeraada oo kasoo Baxaya Qaraxii Suuqa Muqdisho Mall ee Xamar weyne Khasaaraha ka dhashay
Next article C/risaaq Cumar “Dowladda Soomaaliya ha sii ambaqaado wadahadalkii aan la furnay Al-Shabaab xiligaan xafiiska fadhinay”